May 2021 – Newsharpal24
काठमाडौं । सरकारले सांसद विकास कोष खारेज गरेको छ । कोष खारेजीका लागि लामो समयदेखि आवाज उठे पनि विभिन्न सरकारले हिम्मत गर्न सकेका थिएनन् ।गिरिजा, माधव, झलनाथ, प्रचण्ड, बाबुराम, देउवा सरकारले गर्न नसकेको कोष खारेजी निर्णय केपी ओली सरकारले लिएको हो । कोषका नाममा सांसदहरुले कमिसन लिने गरेका छन् । जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवा र […]
May 28, 2021 adminLeaveaComment on साँचो प्रेम हो या मात्र आकर्षण भनेर कसरि थाहा पाउने ?
हामी सबै कुनै न कुनै समयमा प्रेममा पर्छौं। जब यो भावना हाम्रो दिमागमा आउँदछ, हामी यो विश्वास गर्न थाल्छौं कि यहि प्रेम मात्र सत्य हो र अरु सबै कुरा झुटा हुन्। जब मानिषलाइ प्रेम हुन्छ तब ऊ आफ्ना सपनाहरु अरु कसैको सोच संग बाँड्न सुरु गर्छ। तर के यो नै हो त साँचो प्रेम? केहि […]
काठमाडौँ, १२ जेठ । आज देशभर ६७ सय १४ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा थपिएका संक्रमित संख्या मध्ये आज सबैभन्दा कम हो । थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १४ सय ९३ जना थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रलायले जनाएको छ । २४ घन्टामा काठमाडौँमा ११ सय ४९, ललितपुरमा २४१ र भक्तपुरमा ११३ संक्रमित […]
May 26, 2021 adminLeaveaComment on म धन नभएपनि मन चाहीँ भएको मान्छे हुँ : वनमन्त्री आले
काठमाडौं, १२ जेठ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आलेले कोभिड-१९ ले देश ग्रसित भएपछि आफूले व्यक्तिगत रुपमा करिब ३८ देखि ४० लाख बराबरको सामान बाँडेको स्पष्ट पारेका छन् । ती सामाग्रीहरुमा अक्सिजन कन्सन्टेटर चार थान, अक्सिजन सिलिण्डर एक सय थान र सर्जिकल मास्क दुई लाख विस हजार रहेका छन् । उनले जनतालाई दुःख सुखमा आफूले […]
May 26, 2021 adminLeaveaComment on आज चन्द्रग्रहण लाग्दै, सुतक नलाग्ने
काठमाडौं, जेठ १२ । आज खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । चन्द्रग्रहण साँझ ५ः३२ बजे सुरु हुने छ । बुधबार साँझ लाग्ने चन्द्रग्रहण ७ः१६ मध्ये हुने र राति ८:५७ मिनेटमा सकिने पञ्चाङ्गहरूले उल्लेख गरेका छन्। चन्द्रग्रहण छायाँ नेपालबाट नदेखिने भएकाले यसको सूतक नलाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा पृथ्वी आउँदा एउटै […]
May 14, 2021 adminLeaveaComment on प्रधामन्त्री ओलीको शपथ ग्रहण आज
काठमाडौं, बैशाख ३१ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली नेपालको ४२औं प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ ग्रहण शुक्रवार दिउँसो तय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अब ३० दिनभित्र विश्वासको […]
काठमाडौं, २८ वैशाख । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पक्षधर २८ सांसद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिदा अनुपस्थित भएर शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । उनीनिकट सांसदहरुले अझै राजीनामा नदिएर ओलीलाई हटाएर बहुमतको सत्ता समिकरणको सुनिश्चिततालाई कमजोर पारिदिएका छन् ।विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेपालनिकट सांसदहरुको राजीनामाको शर्त समेत प्रस्तुत भएको छ । माधव नेपालले राजीनामा दिनुअघि उपनिर्वाचनमा […]
May 1, 2021 adminLeaveaComment on बेलायतमा प्लाटुन कमान्डर्स ब्याटल कोर्समा नेपाली सैनिक उत्कृष्ट
लन्डन — प्रशिक्षणका लागि बेलायतमा रहेका नेपाली सेनाका एक अधिकृतले अर्को सफलता प्राप्त गरेका छन् ।नेपाली सेनाका २१ वर्षीय सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट पिटर थापा वेल्सको ब्रेकनस्थित इन्फेन्ट्री ब्याटल स्कुलमा भएको प्लाटुन कमान्डर्स ब्याटल कोर्स (पीसीबीसी) २००३ मा टप इन्टरनेसल स्टुडेन्ट घोषित भएका हुन् । गत १८ जनवरी २०२१ देखि ३० अप्रिल २०२१ सम्म भएको तीन महिने उक्त […]